MMTV95: June 2017
Posted by mmtv95 at 6:24:00 PM 18 comments:
Posted by mmtv95 at 11:45:00 PM7comments:
Posted by mmtv95 at 12:08:00 AM No comments:
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ဘ၀ သူရဲကောင်းတွေကို ပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့အခါ ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ Power Rangers တွေရဲ့ Armor တွေ, Zords တွေ နဲ့ Megazord ကို အမိုက်စား အလန်းစား မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ... Go Go Power Rangers ကတော့ အထွေအထူး ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ပါပဲ ... ပြောချင်တာကတော့ နောက်ပိုင်းနားမှာ Power Rangers ရဲ့ Soundtrack ဖြစ်တဲ့ Go Go Power Rangers ကို Zords တွေနဲ့ တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ အမိုက်စားပဲပေါ့ဗျာ ...
Red Ranger - Dacre Montgomery
Blue Ranger - RJ Cyler
Black Ranger - Ludi Lin
Yellow Ranger - Becky G
Pink Ranger - Naomi Scott တို့က ပါဝင်သရုပ်ထားပြီး
Rita Repulsa အနေနဲ့ကတော့ Elizabeth Banks က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
IMDb မှာ Rating 6.6, Rotten Tomatoesမှာ 46% ရရှိထားပါတယ်...
Running Time : 2hrs 4Minutes
>>>Download and Watch Here(1.1G)<<<
>>>Small File Size(491Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 4:14:00 PM No comments:
Labels: 2017, Action, Adventure, Sci-Fi
Naruto (2002 - 2007) ကို တစုတစည်းထဲ ရှာလို့ အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... Anime Fans တွေအတွက် ပြန်ပြောင်း အမှတ်ရစေတာပေါ့ဗျာ ... မြန်မာစာတန်းမထိုးပါ ... English စာတန်းထိုးပါပဲ ...
Episode 021 Episode 022 Episode 023 Episode 024 Episode 025
Episode 026 Episode 027 Episode 028 Episode 029 Episode 030
Episode 031 Episode 032 Episode 033 Episode 034 Episode 035
Episode 036 Episode 037 Episode 038 Episode 039 Episode 040
Episode 041 Episode 042 Episode 043 Episode 044 Episode 045
Episode 046 Episode 047 Episode 048 Episode 049 Episode 050
Episode 051 Episode 052 Episode 053 Episode 054 Episode 055
Episode 056 Episode 057 Episode 058 Episode 059 Episode 060
Episode 061 Episode 062 Episode 063 Episode 064 Episode 065
Episode 066 Episode 067 Episode 068 Episode 069 Episode 070
Episode 071 Episode 072 Episode 073 Episode 074 Episode 075
Episode 076 Episode 077 Episode 078 Episode 079 Episode 080
Episode 081 Episode 082 Episode 083 Episode 084 Episode 085
Episode 086 Episode 087 Episode 088 Episode 089 Episode 090
Episode 091 Episode 092 Episode 093 Episode 094 Episode 095
Episode 096 Episode 097 Episode 098 Episode 099 Episode 100
Posted by mmtv95 at 11:43:00 PM 1 comment:
Labels: 2002, Action, Adventure, Animation, Anime, Comedy, Fantasy, Thriller
၂၀၁၄ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီကိုရီးယားဇာတ်လမ်းဟာ ဂျိုဆန်ခေတ် ဂျောင်ဂျိုဘုရင်ကို လုပ်ကြံတဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ...
ဂျောင်ဂျိုဘုရင်ဟာ ဂျိုဆန်ဘုရင်မင်းဆက်ရဲ့ ၂၂ယောက်မြောက် ဘုရင်ဖြစ်ပြီး "King of Misfortune" ဆိုပြီးလည်း အမည်တွင်ပါတယ် ... နန်းတွင်းမှာ Noron နဲ့ Soron အဖွဲ့တွေရဲ့ အာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့် သူ့အဖေ အိမ်ရှေ့မင်းသားဟာ အဘိုး ဘုရင်လက်ချက်နဲ့ သေခဲ့ရပါတယ် ... ၁၇၇၇ခုနှစ် ဂျောင်ဂျို ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ Noron အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ အာဏာတည်တံ့ရေးအတွက် ဂျောင်ဂျို ဘုရင်ကို လုပ်ကြံဖို့အတွက် နန်တတ်ပြီးပြီးချင်း ပထမနှစ် လုပ်ကြံမှု ခုနစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် .... ဒီကားဟာ အဲ့ဒီ လုပ်ကြံမှု ခုနစ်ခုထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jeongyuyeokbyeon အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ...
မင်းသား Hyun Bin, Jung Jae-young, Jo Jung-suk နဲ့ မင်းသမီး Han Ji-min တို့က အဓိက ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
IMDb မှာ Rating 6.9, Rotten Tomatoesမှာ 60% ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ...
ကြာမြင့်ချိန် ၂နာရီ ရှိပေမယ့် ... နန်းတွင်းအရေးရှုပ်ထွေးမှု သံယောဇဉ် မေတ္တာတွေကို ပျင်းစရာမရှိအောင် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ...
ဘာသာပြန်သူကတော့ Eaint Chu San ပါ ...
>>>Download and Watch Here(993Mb)<<<
>>>Small File Size (446Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 10:56:00 PM No comments:
Labels: 2014, Action, Drama, Korea
Manjhi: The Mountain Man (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ကျွန်တော်တို့ဟာ အချစ်ကို ပုံစံမျိုးစံနဲ့ ခံစားကြတယ် ပုံဖော်ကြတယ် ... အချစ်ကြောင့် စွန့်စားခဲ့သူတွေ အချစ်ကို ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ အချစ်ကြောင့် ... အဲ့လိုမျိုးတွေကို ပုံပြင်တွေမှာရော တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ မြင်ဘူးကြားဘူး သိဘူးခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ် ... ဒါဆို အချစ်ကို ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပုံဖော်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ အဲ့ဒီအချစ်ကြောင့်ပဲ တောင်ကို အလယ်ကနေဖြိုပြီး လမ်းဖောက်ခဲ့တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လက်ခံမလား ယုံကြည်မလား???
တကယ်တော့ အဲ့ဒီလူက တကယ်ရှိပါတယ် ...သူက အိန္ဒိယနိုင်ငံသား Dashrath Manjhi ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ... သူ့ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီဟာပြည်နယ် ဂါယာမြို့နားလေးက Gehlaur ဆိုတဲ့ ရွာလေးမှာ ဆင်းရဲ့တဲ့ မိသားစုကနေ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်.... အဲ့တုန်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ ကာလတစ်ခုပါ ... ဒါပေမယ့် သူတို့ရွာလေးကတော့ ဘာမှမပြောင်းလဲတဲ့အပြင် အဲ့ဒီရွာကို သွားဖို့ လမ်းတောင် ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ ... နောက်ပြီး Gehlaur နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးမြို့ကိုသွားဖို့ အတွက် ကြားမှာ တောင်တစ်ခု ခံနေပါတယ် ... တောင်ကိုပတ်သွားရင် မိုင်၄၀ ကွာဝေးပြီး တောင်ပေါ်က ဖြတ်ရင်တော့ ၄မိုင်ပဲ ကွာဝေးတာဖြစ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် ဒီလိုမတ်စောက်တဲ့တောင်ကိုဖြတ်ပြီး ဘယ်သူမှ ကူးသန်းရောင်းဝယ်သွားလာမှု မလုပ်ကြပါဘူး ...
ဒါပေမယ့် အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်လာတဲ့ပြီး ၂၂နှစ်ကြာပြီးတဲ့ နောက်မှာ အဲ့ဒီတောင်ကြီးဟာ Dashrath Manjhi ဆိုသူရဲ့ လက်အောက်မှာ နှစ်ခြမ်းကွဲပြီး လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဇွဲကို အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ် ....
ဟုတ်ပါပြီ Dashrath Manjhi ဟာ ဘာလို့ အခုလို ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ရတာလည်း???
အချစ်က တကယ်ပဲ လူတစ်ယောက်ကို တွန်းအားဖြစ်စေလား??? အဲ့ဒါတွေအပြင် ...
အဲ့ဒီခေတ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လူတန်းစားအနိမ့်အမြင့် ခွဲခြားမှု... ဆင်းရဲသားတွေကို အဆမတန် ခိုင်းစေမှု ... နိုင်ငံရေးသမား၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေချစားမှုကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ...
အဲ့ဒီ လှိုင်းဒဏ်တွေကို Dashrath Manjhi တစ်ယောက် ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး ...
ဒီဇာတ်ကားဟာ Dashrath Manjhi အကြောင်းရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ အတ္ထုပတ္တိဆန်ဆန် ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ် ... Rating ကတော့ IMDbမှာ 8.1 ရရှိထားပြီး
Nawazuddin Siddiqui က Dashrath Manjhi အဖြစ်
Radhika Apte က Dashrath Manjhi ရဲ့ ဇနီး Falguni Devi အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ထားပါတယ် ...
>>>Small File Size (442Mb) <<<
Posted by mmtv95 at 5:11:00 PM No comments:
Labels: 2015, Biography, Drama, History, Romance
ဒီစီးရီးဟာ KBS ရုပ်သံကနေ မေလ ၃၁ရက်နေ့က စတင်ပြသနေတဲ့ ကိုရီးယားနန်းတွင်း အချစ်ဇာတ်လမ်း စီးရီးပဲဖြစ်ပါတယ် ... ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ သောကြာနေ့တွေမှာ ထုတ်လွှင့်တာ ဖြစ်ပြီး ဒီစီးရီးမှာ အပိုင်း ၂၀ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအစမှ ပြောထားသလိုပဲ သမိုင်းကို အခြေခံထားပေမယ့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ... သမိုင်း ကျောရိုးအနေနဲ့ကတော့ မင်းသား Jin Saung ဟာ Shin Chae-Kyung နဲ့ ၁၄၉၉ ခုနှစ်မှာ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၁၅၀၆ မှာ မင်းသား Jin Saung က ဘုရင်ဖြစ်လာပြီး Shin Chae-Kyung ကတော့ မိဘုရားဖြစ်လာပါတယ် ... ဒါပေမယ့် ခုနစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ မိဘုရားအရာကျသွားပြီး နန်းတွင်းပြင်ပကို နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ... ဒါကတော့ ဂျိုဆန်ခေတ်မှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကျောရိုးပါ ... ဒါကို အခြေခံပြီးတော့ KBS ရုပ်သံစီးရီးက Queen for Seven Days ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်... စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါလို့ ...
ဒီစီးရီးထဲမှာ မင်းသမီး Park Min Young, Park Shi Eun, မင်းသား Yun Woo Jin, Baek Seung Hwan နဲ့ Lee Dong Gun တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
Posted by mmtv95 at 12:21:00 PM9comments:
Labels: 2017, Drama, History, Korea, Romance, Series
နာမည်ကိုက Ronaldo ပါဆိုတော့ Ronaldo ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားပေါ့ ... Cristiano Ronaldo ရဲ့ Biography ကားပါ ... ပါဝင်သူတွေအားလုံးက သရုပ်ဆောင်တွေမဟုတ်ပါဘူး ... အားလုံးက Ronaldo နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူတွေချည်းပါပဲ ... ဘောလုံးဖန်တွေနဲ့ CR7 ဖန်တွေ နှစ်သက်မယ် ထင်ပါတယ် ...
ဒီဇာတ်ကားကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး Director Anthony Wonke က ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ် ...
IMDb မှာ Rating 6.4 ရထားပြီး mmtv95 မှ တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် ...
>>>Download and Watch Here(976Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 12:40:00 AM No comments:
Labels: 2015, Biography, Documentary, Sport